ဤစာအုပ်ကို-လေ့လာအပြုအမူ (အခန်း 2) နှင့်မေးခွန်းများမေး (အခန်း 3) တွင်ယခုအထိဖုံးလွှမ်းချဉ်းကပ်မှုအတွက် -researchers သဘာဝကျကျကမ်ဘာ​​ပျေါမှာဖြစ်ပေါ်နေသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းဒေတာစုဆောင်းပါ။ အဆိုပါချဉ်းကပ်မှုအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောဤအခနျး-running-ဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်ချက်အတွက်ဖုံးအုပ်လေ၏။ သုတေသီများစမ်းသပ်ချက်ကို run တဲ့အခါသူတို့စနစ်တကျထွက်ရှိသောအကြောင်းမရှိ-and effect ကိုဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းမှကိုက်ညီကြောင်းဒေတာဖန်တီးရန်ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျ်ရောက်စွက်ဖက်။
ဖြစ်ပေါ်စေ-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုလူမှုရေးသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်ဘုံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဥပမာထိုကဲ့သို့သောဆရာ, ဆရာမ '' လစာကျောင်းသားသင်ယူမှုတိုးမြှင့်တိုးလာသလားအဖြစ်မေးခွန်းတွေကိုလည်းပါဝင်သည်? အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှုန်းထားများအပေါ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လျှောက်ထားသူရဲ့မျိုးနွယ်တစ်ဦးအလုပ်ရတဲ့၏သူမ၏အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်သနည်း? ဤအပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မေးခွန်းများကိုအပြင်, တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်စေ-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုအချို့သောစွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ်၏အခွခေံအကြောင်းပိုမိုယေဘုယျမေးခွန်းတွေကိုအတွက်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ, မေးခွန်း "ဘာအရောင် button ကိုတစ်ဦးအန်ဂျီအိုဝက်ဘ်ဆိုက် site ပေါ်တွင်အလှူငွေတိုးမြှင့်ကြမည်နည်း" တကယ်အလှူငွေများအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသော button ကိုအရောင်အဆင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းမရှိ-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်တစ်ခုမှာလမ်းရှိပြီးသားဒေတာအတွက်ပုံစံများကိုရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျောင်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှဒေတာများသုံးပြီးသင်ကျောင်းသားများအားမြင့်မားဆရာမလစာဆက်ကပ်ကြောင်းကျောင်းများတွင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူကြောင်းတွက်ချက်ခြင်းငှါ, ။ ဒါပေမယ့်ဒီဆက်စပ်မှုပိုမိုမြင့်မားလစာကျောင်းသားများကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူစေကြောင်းဖျောပွသနညျး ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ဆရာများကပိုဝင်ငွေဘယ်မှာကျောင်းများနညျးလမျးမြားစှာရှိကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်မြင့်မားသောဆရာမလစာနှင့်အတူကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားများအားချမ်းသာမိသားစုများထံမှလာပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်ဆရာ, ဆရာမတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုတူရုံကျောင်းသားများကိုအမျိုးမျိုးနှိုင်းယှဉ်ထံမှလာနိုငျတယျ။ ကျောင်းသားများကိုအကြားဤရွေ့ကား unmeasured ကွဲပြားခြားနားမှုရှက်ကြောက်ချေါနှင့်အထွေထွေအတွက်, ရှက်ကြောက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးသားဒေတာအတွက်ပုံစံများကိုရှာဖွေနေသဖြင့်အကြောင်းရင်း-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သုတေသီများကစွမ်းရည်အပေါ်ဖျက်ဆီး wreaks ကြသည်။
ရှက်ကြောက်၏ပြဿနာအားတစ်ဦးကဖြေရှင်းချက်အုပ်စုများအကြား observable ကွဲပြားမှုများအတွက်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်မျှတနှိုင်းယှဉ်ပါစေဖို့ကြိုးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နံပါတ်ကနေအိမ်ခြံမြေအခွန်ဒေတာကို download လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သငျအိမျစျေးနှုန်းတွေဆင်တူပေမယ့်ဆရာမလစာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်ဆဲကျောင်းသားများကိုပိုမိုမြင့်မားဆရာမလစာနှင့်အတူကျောင်းများတွင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူကွောငျးတှေ့စေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်နိုင်။ သို့သော်များစွာသောဖြစ်နိုင်သောရှက်ကြောက်နေတုန်းပဲရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းဤသူကျောင်းသား၏မိဘပညာရေးသူတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတွေအများပြည်သူစာကြည့်တိုက်မှသူတို့ရဲ့ရငျးနှီးမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားဒါမှမဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားဆရာမလစာနှင့်အတူကျောင်းတွေလည်း, ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနှင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးလစာများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားလစာ, မဆရာမလစာများတိုးမြှင့်သည်အဘယ်အရာကိုတကယ်ဖြစ်ပါသည် ကျောင်းသားသင်ယူမှု။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာသည်ဤအခြားအချက်များကိုတိုင်းတာဖို့ကြိုးစားနိုင်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှက်ကြောက်၏စာရင်းကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မြားစှာသောအခြေအနေများတွင်, သင်ရုံကိုတိုင်းတာမရနိုငျအပေါင်းတို့နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှက်ကြောက်ဘို့ adjust ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုသာယခုအထိသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ရှက်ကြောက်၏ပြဿနာအားတစ်ဦးကပိုကောင်းဖြေရှင်းချက်စမ်းသပ်ချက်အပြေးသည်။ စမ်းသပ်ချက်သဘာဝကျကျယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြောင်းရင်း-and effect ကိုမေးခွန်းဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် data တွေကိုဖြစ်ပေါ်အတွက်ဆက်စပ်မှု ကျော်လွန်. ရွှေ့ဖို့သုတေသီများကို enable ။ အ Analog စအသက်အရွယ်ခုနှစ်တွင်စမ်​​းသပ်ချက်မကြာခဏဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲပြီးစျေးကြီးရှိကြ၏။ အခုဒီဂျစ်တယ်ခေတ်၌, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးန့်အသတ်တဖြည်းဖြည်းကွယ်ပျောက်နွမ်းကြသည်။ မသာပါကအတိတ်ကာလပွုပါပွီသူတို့အားသုတေသီများတူစမ်းသပ်ချက်လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်, ကစမ်းသပ်ချက်သစ်အမျိုးမျိုးကို run ဖို့ယခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ငါယခုအထိကျမ်းစာ၌ရေးထားဖူးတဲ့အဘယျသို့ခုနှစ်တွင်ငါသည်ငါ၏ဘာသာစကားတွင်တစ်နည်းနည်းလျော့ရဲရဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အရာနှစ်ခုအကြားခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်: စမ်းသပ်ချက်များနှင့် randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက်တစ်ဦးသုတေသီလောကရှိ intervenes ပြီးတော့တစ်ဦးရလဒ်ကိုတိုင်းတာသည်။ ငါအဖြစ်ဖော်ပြဒီချဉ်းကပ်မှုကြားဖူးတယ် "အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနှင့်စောငျ့ရှောကျ။ " ဒီမဟာဗျူဟာသဘာဝသိပ္ပံအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံအတွက်, ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အခြားချဉ်းကပ်မှုလည်းရှိ၏။ တစ်ဦး randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုများတွင်တစ်ဦးသုတေသီတခြားသူတွေကိုအချို့လူများနှင့်မ intervenes နှင့်ပြင်းထန်စွာခြင်း, သုတေသီလူ (ဥပမာ, တစ်ဒင်္ဂါးကိုလှန်ကြည့်) Randomization အားဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုခံယူသောဆုံးဖြတ်သည်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်အုပ်စုနှစ်စုအကြားမျှတနှိုင်းယှဉ်ဖန်တီးသေချာ: မရှိတယ်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်တစ်လက်ခံရရှိကြောင်းတည်း။ တနည်းအားဖြင့် randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်ရှက်ကြောက်၏ပြဿနာများမှအဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်များနှင့် randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်အကြားအရေးကြီးတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုနေသော်လည်းလူမှုရေးသုတေသနပညာရှင်များကမကြာခဏအပြန်အလှန်ဤဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုပါ။ ငါသည်ဤစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်, အချို့သောအချက်များမှာငါ Randomization နှင့်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမပါဘဲစမ်းသပ်ချက်ကျော် randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်၏တန်ဖိုးကိုအလေးပေးဖို့စည်းဝေးကြီးချိုးဖျက်ပါလိမ့်မယ်။
randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်လူမှုရေးလောကအကြောင်းသင်ယူဖို့အားကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြ, ဤအခနျးမှာ, ငါသည်သင်တို့၏သုတေသနပြုချက်၌သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင်ပိုမိုသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပုဒ်မ 4.2 ၌ငါသည်ဝီကီပီးဒီးယားတခုတခုအပေါ်မှာစမ်းသပ်မှု၏ဥပမာတစ်ခုနှင့်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်၏အခြေခံယုတ္တိဗေဒသရုပျဖျောပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ပုဒ်မ 4.3 ၌ငါသည်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များနှင့်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်နဲ့ Analog စမ်းသပ်ချက်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များအကြားခြားနားချက်များအကြားခြားနားချက်ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အားလုံးယခင်ကမဖွစျနိုငျကွောငျးကိုတစ်စကေးမ​​ှာ, Analog စဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက် (တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်မှု) နဲ့ Analog လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက် (သရုပ်မှန်) ၏အကောင်းဆုံး features တွေကိုပူဇော်နိုင်မငြင်းပါလိမ့်မယ်။ ဆက်လက်. ပုဒ်မ 4.4 ၌ငါသည်သုံးသဘောတရားများ-တရားဝင်မှု, ကုသမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ယန္တရားများသောကြွယ်ဝသောစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းများအတွက်အရေးပါများမှာ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ (ပုဒ်မ 4.5.1 စာတစောင်) ကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်နေတာသို့မဟုတ်အင်အားကြီး (ပုဒ်မ 4.5.2) နှင့်တွဲဖက်လုပ်ငန်း: ကြောင်းနောက်ခံနှင့်အတူငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ပို့ချဘို့နှစ်ခုအဓိကမဟာဗျူဟာမှာပါဝင်နေတဲ့ trade-off ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်တို့ကိုငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက် (ပုဒ်မ 4.6.1) ၏အစစ်အမှန်အာဏာအားသာချက်ကိုယူပြီးအာဏာ (ပုဒ်မ 4.6.2) နဲ့လာတာဝန်အချို့ကိုဖော်ပြရန်နိုငျပုံနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောဒီဇိုင်းအကွံဉာဏျနှင့်အတူကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။ အခန်းသင်္ချာသင်္ကေတများနှင့်တရားဝင်ဘာသာစကား၏နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်, စမ်းသပ်ချက်မှတစ်ဦးထက်ပိုတရားဝင်, သင်္ချာချဉ်းကပ်မှု၌စိတ်ဝင်စားစာဖတ်သူတွေလည်းအခန်းရဲ့အဆုံးမှာနည်းပညာဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဖတ်သင့်သည်။